कार हल्लिरहेको देखेर प्रहरी पुग्दा भित्र जोडी यस्तो शर्मनाक हर्कत! बयान सुनेपछि प्रहरी नै चकित! – PathivaraOnline
Home > बिचित्र > कार हल्लिरहेको देखेर प्रहरी पुग्दा भित्र जोडी यस्तो शर्मनाक हर्कत! बयान सुनेपछि प्रहरी नै चकित!
admin October 1, 2020 October 1, 2020 बिचित्र, रोचक	0
काठमाडौं । सडक छेउमा रोकिएको एक कार हल्लिरहेको थियो । भारत, उत्तर प्रदेशको गोरखपुर सडक किनारमा रातो रंगको कार अचानक गोरखपुरको नक्षत्र क्षेत्रमा शनिबार साँझ समुद्री यात्राको नजिकै हल्लिन थाल्छ । यो देखेर त्यहाँ उपस्थित प्रहरी र अन्य मानिसहरु कारको नजिक पुगे । भित्र हेर्दा, कारमा बसिरहेका प्रेमी जोडीहरू शारीरिक सुखभो’गमा रमाइरहेका थिए । यसै बीच प्रहरीलाई देखेर उनीहरु गाडी लिएर भाग्न थाले । भिडियोः
तिनीहरूको गतिविधि रंगेहात फेला परेपछि, प्रहरीहरूले कन्ट्रोल रूममा सूचना दिए, पछि सम्पूर्ण जिल्लामा जाँच सुरु भयो । खोबर प्रहरीले सूचनाको आधारमा उक्त युवक र कारमा सवार महिलालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरी शनिबार साँझ ५ बजेतिर नौका केन्द्रमा गस्ती गर्दै थिए । यसै बीचमा, सडक छेउमा उभिएको कार अचानक हल्लिएको देखियो ।
जब कार नजिक पुगेर हेरियो तब भित्र जवान मानिस र महिला शा$रीरि$क सुखभो$गमा रमाईरहेको स्थितिमा थिए ।उनीहरुले रोक्न खोज्दा प्रहरीलाई चक्मा दिएर फरार हुन खोजेका थिए । भागेपछि शंका लागेर प्रहरी कन्ट्रोल रूममा सूचना दिइन्छ । प्रहरीले मोटरसाइकलमा उनीहरूलाई पछ्याउन थाल्छ । कार प्रेमीहरू खोबारको लागि देउरिया बाईपास हुँदै ।
बाटोतर्फ लागे । सूचना पाएपछि खोबार प्रहरीले घेरा हालेर प्रहरी चौकी अगाडिबाट जंगलतिर लाग्यो, तर पुलिसले घेराबन्दी गर्यो । दौडिरहेको बेला, कार सवारले दुई बाइक सवारहरूलाई ठक्कर पनि दिएका थिए ।सोधपुछको क्रममा थाहा भयो कि ती युवती चिलुआताल क्षेत्रकी हुन् । चौरिचौरा बस्ने एक युवकसँग उसको प्रेम सम्बन्ध थियो ।
शनिबार उनी नौकायन सेन्टरमा आफ्ना प्रेमीलाई भेट्न गइन् । तर यसै बीचमा उनीहरू दुवैले कारमा नै रमाउने सल्लाह लिन्छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को असरका कारण होटलहरु बन्द थिए । यसैले कारलाई नै आफ्नो ठान्ने निर्णय लिएको उनीहरुले बयान दिएका छन् । जब प्रहरीहरुले हस्तक्षेप गरे, तिनीहरू डराउन थाले ।
इन्चार्ज खोराबर नासिर हुसेनले उनी कसैकी छोरी भएको र छोरीलाई उनकी आमासँगै घर पठाइएको जानकारी दिएका छन् । उक्त युवकलाई शान्तभं’ग आरोपमा चलान काटिएको छ । समाचार जनबोली डटकममा छापिएकाे छ । ***समाचारहरूकाे भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस***